Dilkii Taliye ku xigeenkii labaad ee booliska Puntland oo dad loo qabtay . Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Dilkii Taliye ku xigeenkii labaad ee booliska Puntland oo dad loo qabtay . Maamulka Puntland ayaa sheegay in uu dad usoo qabtay dilkii xalay loogu gaystay magaalada Garoowe Taliye ku xigeenkii labaad ee booliska Puntland.
Baaritaano ay ka sameeyeen ciidamada Maamulka Puntland magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ayaa waxaa la sheegay in ay kusoo qabteen 3 ruux oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dilkii Taliye ku xigeenkii labaad ee booliska Puntland.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland C/samad Cali Shirre oo ka hadlay dilka Taliyaha ayaa sheegay in ay ka xun yihiin dilka Taliyaha oo uu sheegay in dadkii gaystay ay talaabo ka qaadi doonaan, isaga oo ka codsaday shacabka Puntland inay kala shaqeeyaan amaanka oo soo sheegaan cid kasta oo ay arkaan inay halis ku tahay amniga.
C/laahi Saalax Maxed, Taliye ku xigeenkii labaad ee booliska Puntland ayaa xalay rag hubaysan waxa ay ku dileen isaga oo gaari watay Koofurta magaalada Garoowe.